अञ्जु पन्तको गीतमा रिचा र आयानको प्रेम (भिडियो सहित) – Naya Pusta
अञ्जु पन्तको गीतमा रिचा र आयानको प्रेम (भिडियो सहित)
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ असार ७, शनिबार २०:३५ [post-views]
काठमाडौं । गायिका अञ्जु पन्तको स्वरमा ‘गीत तिम्रो’ बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक गरिएको छ । पुरुषोत्तम न्यौपानेको सँगीत रहेको गीत रिकेश गुरुंङले एरेन्ज गरेका हुन् । यस्तै गीतको भिडियोमा नायक आयान बज्राचार्य र मोडल रिचा थापाको अभिनय रहेको छ ।
सञ्चारकर्मी सविन प्रियासनको शब्द रहेको प्रियासन एल्वमको उक्त गीत गोदाबरीमा छायांकन गरिएको हो । प्रिन्सपन कार्कीको निर्देशनमा तयार भएको उक्त भिडियो उत्सब दाहालले खिचेका छन् हुने भिडियो नवीन निरौलाले सम्पादन गरेका हुन् ।
भिडियोको मेकिङ चलचित्रको शैलीमा छ । उत्कृष्ट लोकेशन र मेकिङले गर्दा दर्शकले भिडियोबाट पनि थप मनोरञ्जन लिन सक्नेमा रचनाकार प्रियासन आशावादी छन् । ‘इतिहास’, ‘कालापानी’ लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका नायक आयान पुनः अभिनयमा जम्ने सोँच सहित फर्किएका छन् ।
नायक आयनले अभिनय गरेका अन्य गीतहरु पनि केही समयमा नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । लामो समय देखि अभिनयमा क्रियाशिल रिचाको पनि हालसम्म दर्जनौ म्यूजिक भिडियो आइसकेका छन् भने उनले अभिनय गरेको लभ्यु हमेसा चलचित्र पनि पर्दशनको तयारीमा छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : यी अंगमा भूलेर पनि नलगाउनुहोस् सुन, कुन अंगमा लगाउँदा शुभ ?
अब भारत जाने नेपालीलाई भिसा चाहिने (विज्ञप्ती सहित)
यी अंगमा भूलेर पनि नलगाउनुहोस् सुन, कुन अंगमा लगाउँदा शुभ ?
मन्जु पौडेललाई हँसाएरै मुर्छा पारे पित्री बुढाले, अहिलेसम्मकै रमाइलो कुराकानी
भाग्य चम्काउन चाहानुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुस् (भिडियो)